Umzobo kaCharles I nguMlandeli ka-Anthony van Dyck Uyathengiswa kwi-Intanethi - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa Uze njani uMlandeli ka-Anthony van Dyck Wenza umfanekiso oPhoqelelayo kaCharles I
Uze njani uMlandeli ka-Anthony van Dyck Wenza umfanekiso oPhoqelelayo kaCharles I
‘Umzobo kaKumkani uCharles I (1600-1649),’ nguMlandeli kaSir Anthony van Dyck.Ngobubele bukaChristie
Phakathi kobhubhane wehlabathi ovaleleke sonke emakhayeni ethu kwaye usinyanzele ukuba sicingisise ngokutsha ngeendlela ezintsha zokuba nexesha elimnandi, kuyathakazelisa ukuqaphela imeko yabantu ababephila kwiinkulungwane ezidlulileyo, kwaye ngubani ekufuneka ajongane naye iingxaki ezinje ngesifo esosulelayo kungekho nto ngaphandle kwemithandazo kunye nencwadi emnandi yokufunda ebhedini yokugula. Ngokufanelekileyo, ngoLwesine, uChristie wakha i-intanethi kuphela Imizobo yeMasters yakudala kunye noMzobo ifandesi eza kuqhuba nge-30 kaJulayi, kwaye ibalaselisa imisebenzi eyaqala kwixesha eliphakathi ukuya kuthi ga kwixesha le-neoclassicism; ixesha apho ukungqubana kobomi kwakudluliselwa ngokufanelekileyo ngokupeyinta.
BONA KWAKHO: UChristie unikezela nge-40 yezigidi zeedola uBarnett Newman kwisiXeko seSine sokuThengisa ukuPhula iiRekhodi
Omnye wemisebenzi enomdla kakhulu uyathengiswa, uqikelelwa ukuba uye malunga ne- £ 50,000 ukuya kwi- $ 80,000 yeepawundi, ($ 63,000 ukuya kwi- $ 100,000) Umzobo kaKing Charles I (1600-1649), umzobo owenziwe ngumlandeli kaSir Anthony van Dyck, umzobi owaziwayo wenkundla kakumkani. Umfanekiso ubonakalisa ukumkani emi ngxi kwigumbi elihonjiswe ngokuhomba, ngelixa isandla sakhe sityibilikiswe ngaphezulu kwendlela eguqukayo enikezelweyo ekhangeleka ngathi iyafunxa kwaye iphikise wonke umbala kulo mfanekiso. Umzobo kaCharles I ngowona mfanekiso ubalaseleyo weKumkani xa wayekwincopho yamandla akhe, ejikelezwe ziimpawu zasebukhosini kwaye isandla sakhe siphumle kwiglobhu yeglass, uMilo Dickinson, iNtloko yeNtengiso eChristie, uxelele uMbonisi. Inembali enomdla njengoko iyinxalenye yeqela lemifanekiso ekuMfanekiso oMdala kunye nokuThengiswa kwamanani abemi basebukhosini nababekekileyo ngaphambili kwiiDukes zaseManchester eKimbolton Castle. U-Earl wesibini waseManchester wayengumhlobo wobuntwana kaCharles I kodwa wagqibela ngokukhokelela kwimikhosi yasePalamente ngokuchasene naye kwiMfazwe yamakhaya. Siyakholelwa ukuba kusenokwenzeka ukuba u-Earl wesibini wathumela lo mfanekiso kaCharles I xa uCharles II wafumana amandla okubonisa ukuthembeka kwakhe kwisithsaba.
Ke, ukuba uzifumanisa ucinga ngolunye urhatya olunesithukuthezi lweNetflix kunye nokuhamba kude ekuhlaleni, kunokukunceda ukhumbule ixesha apho umfanekiso wecrystal orb wawunyanzelisa ngokwaneleyo ukuthimba iinkundla zasebukhosini: Ngale ndlela, ungayiqeqesha ii-synapses zokuxabisa uhlobo olwahlukileyo lwesikhuthazi.
Entsha kwiBhloko luthotho olujonga ezona zinto zibalulekileyo okanye ezingaqhelekanga ukuya kwifandesi veki nganye.
Ngaphezulu kwe-100 yabalandeli bakaKylie Jenner Banikele ngokumenza iBillionaire eyiyo
Iminyaka eli-10 kamva isigebenga saseMontanauk siseyinto engaqhelekanga, enkulu, eyimfihlakalo emnyama
Abasebukhweni bakaPippa Middleton bangabanini bayo Ihotele eNtofontofo eSt
Ubugcisa obuyimfihlo bukadkt seuss
yintoni ekusasazeni kwe-Netflix
yi-nj imeko eluhlaza okwesibhakabhaka
Uphi u-obama uhlala apha
Indoda esisityebi kwi-hong kong